ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019
နေအိမ် > ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အခါဥရောပရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမြို့တော်သို့သွားရောက်ခြင်းမှကြွလာ, လန်ဒန်သည်ခရီးသွားဧည့်သည်တိုင်း၏ဆန္ဒစာရင်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေပြီးလန်ဒန်တွင်လုပ်စရာများစွာရှိသည်မှာသေချာသည်. ဒါဟာတာရှည်တယ်ရဲ့, စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်း; လှပသောအထင်ကရအဆောက်အနှင့်မြင်ကွင်းများ; နှင့်အရာအများကြီးရှိပါတယ်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဒါဟာဥရောပအရည်အသွေးကိုဒိန်ခဲများအတွက်အကောင်းဆုံး destination သည်ကြောင်းကိုအလွန်လူသိများတဲ့တကယ်တော့င်. ထိုအခါဒိန်ခဲကိုနှစ်သက်အဖြစ်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းဥရောပပူဇော်ရန်နှင့်တွေ့ဖို့ဘယ်လိုရှိတယ်ကိုအကောင်းဆုံးဒိန်ခဲဖြစ်သည့်သိလို. ကျနော်တို့ကတဆင့် run အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ah, ဆွစ်ဇာလန်, အီတလီအကြားသက်တောင့်သက်သာထိုင်ပြီးလှပငြိမ်းချမ်းသောတိုင်းပြည်, ပြင်သစ်, နှင့်ဂျာမနီ. ဆွစ်ဇာလန်ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံများထဲမှတစ်သမတ်တည်းသတ်မှတ်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုလေ့လာရန်လည်ပတ်သင့်သည်. ဒါကြောင့်သင် '' ဆွစ်ဇာလန် '' စဉ်းစားသောအခါအဘယ်သို့ထင်ကြဘူး? ငါ…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဥရောပသို့မကြာမီအချိန်မရွေးသွားရန်စီစဉ်ထားပါသလော? အဖြေဟုတ်သည်မှန်လျှင်, ထို့နောက်သင်စျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေဥရောပအသုံးပြုမှုစေချင်ပါလိမ့်မယ်. ဒါကမှန်သည်. သငျသညျရထားလက်မှတ်တွေပေးသော်လည်းနိုင်ပါတယ်, အရာပေါ်ခရီးသွားလာသည့်အခါစျေးပေါစျေးနှုန်းနေကြသည်…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ သငျသညျအမ်စတာဒမ်မှခရီးစဉ်စီစဉ်ပေမယ့်နေဆဲသွားကြဖို့အကောငျးဆုံးအခြိနျထွက်ရှာဖွေခဲ့ပြီးပြီဆိုပါက, သငျသညျစားသောက်ဆိုင်အပတ်စဉ်ခရီးစဉ်ကိုစဉ်းစားရန်လိုပေမည် 2019 နယ်သာလန်နိုင်ငံ. စားသောက်ဆိုင်အပတ်သည်ကမ္ဘာတစ်လွှားနှစ်စဉ်ကျင်းပသောအချက်အပြုတ်ပွဲဖြစ်သည်…
သင်ကသင့်ရဲ့ပြည်တွင်းရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်အွန်လိုင်း Buy သင့်တယ်?
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဒီ post မှာတော့, ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေသတွင်းရထားလက်မှတ် ၀ ယ်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်. အမြားအပွားကိစ္စများတွင်, ခရီးသွားများသည်နောက်ဆုံးအခိုက်အတန့်အထိစောင့်ပြီးမှ၎င်းတို့၏လက်မှတ်များကိုကြိုတင်မှာယူလေ့ရှိကြသည်. ရထားလက်မှတ်တွေနောက်ဆုံးမိနစ် booking လုပ်ဖို့ပညာရှိတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး. ဤဆောင်ပါး…